Alcatel OneTouch Idol 3 - smartphone, akanalo eqolo, kodwa nokho uyakwazi izinga inhlangano ukujabulisa abasebenzisi, futhi ehloniphekile ezimnandi design Ukucaciswa. Kulesi sihloko, sizofunda ukuhlola izici eziyinhloko "Alcatel Idol 3", ukubuyekezwa abanikazi, ngubani Usukuthengile kule yunithi futhi usebenze isikhathi esithile, kanye umbono wazo izinga lomsebenzi wakhe.
Yakha Design &
Kusukela umhlangano abathengi kuyamjabulisa: smartphone ngokuphelele uhlangothi, ine ukubukeka ekhangayo, isakhiwo esincane (7.4 mm) kanye nesisindo kuqhathaniswa ukukhanya (141 amagremu). Futhi elimnandi yokuthi idivayisi ezimbili yesifakwandlebeni elise nangaphezulu. Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi ngeke uthole ifoni ekhukhwini lakhe njengoba bakwazi ukuxhumana, ngisho ngenkathi ebambe izindlu "sibheke phansi".
Nakuba zisekhona eyigeza, design okuthembekile kanye nosayizi elula, ezinye amaphutha yobuhle ekuklanyweni. Ikakhulukazi, yaphawula ukuthi ngokuhamba kwesikhathi upende ikhasi off-chrome plastic. Ikakhulukazi kumayelana amakhi evolumu kanye emakhoneni igajethi.
"Alcatel Idol 3" (impendulo ubufakazi) has a isibonisi kakhulu eliphezulu. Nakuba ifoni smart futhi ukukhanya cishe Midrange unika kakhulu kudivayisi umbala ukukhiqizwa kabusha. Futhi athabiswa engeli wekugcina, ikuvumela ukuba ubone ulwazi esikrinini ngasiphi angle. Elangeni, isibonisi buphela, kodwa hhayi kakhulu. IPS--matrix isinqumo 1080 ikuvumela ukuba ujabulele movie, izithombe egqamile futhi jabulisa wena nge izinga imidlalo yesimanje.
Ngokuqondene "ukufaka ngokuthinta" umsebenzi, lapha esibukweni wazibonakalisa ngempela ayakufanelekela. Awuzange waphawula iyiphi amaphutha sina kulesi sici, ngakho emigodini ku fa inzwa igajethi.
Qualitative ayisishiyagalombili-processor Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 - cores ezine ukuboniswa 1.5 GHz, bebane 1 GHz - bathandile abanikazi idivayisi. It ivumela uhlelo ukusebenza smartly ngokwanele futhi uzinzile. Ukusebenzisa izicelo olunzulu ngeke ukukhipha, njengoba on-ebhodini iyunithi efakwe 2 GB we-RAM. Lubhekele ihluzo Adreno 405. Nakuba kulezi zici futhi zithandwa Okuqukethwe akuzwakali namuhla, abasebenzisi musa wathola izikhalazo mayelana nokusebenza.
16 GB wesitoreji etholakalayo idatha okuzenzakalelayo. Ngo kusaqalwa usebenzisa imemori khadi (microSD flash iyunithi isekela kufika 128 GB) ngokuvamile abakwazi ukuthenga, ngoba ivolumu ekhethiwe idrayivu kanzima kwanele ukumpompa umculo, imidlalo, izinhlelo zokusebenza, kanye ongaphakeme isinqumo movie.
Zonke izindlela zokuxhumana, efana ne-Wi-Fi, i-Bluetooth ne-USB, abasebenza kahle futhi akubangi izikhalazo evela kubanikazi bako. Excellent show ngokwabo 4G-inethiwekhi. Lapha-smartphone "Alcatel Idol 3" (izimpendulo uqinisekise leli qiniso) ubhekana nomsebenzi wakhe.
Of uqaphele amaphutha amancane kudivayisi podvisanie isiqalisi uma kuvulwa.
Excellent stereo izikhulumi endowed yoMdali wabo "Alcatel Idol 3". Izibuyekezo Umthengi bathi umsindo kwaba bha, ukuze ifoni ingasetshenziswa njengendlela ephelele MP3-player, ngoba idivayisi okudlula lapho abasebenza ngama-earphone.
Izibuyekezo ezixutshiwe mayelana ifoni "Alcatel Idol 3" kwesokunxele mobile abathandi isithombe: Ikhamera iwine umbono impikiswano. Ukuntuleka izinga izithombe (yokukhanya uyawachitha isinqumo 13 megapixel), abanye bakhononda inombolo okuncane izici nezilungiselelo.
Siphawula ukuthi igajethi uyakwazi ukudubula amavidiyo 1080p 30 ngesekhondi ngesikhathi izinga sezingeni eliphezulu.
Izibuyekezo ezinhle kakhulu won ikhamera 8 megapixel. Amanothi ezenza selfie-zithombe kuyajabulisa: isithombe esicacile 'iyezwakala. Yiqiniso, ngokuya ukuntula ukukhanya kokubili amakhamera liziphathe kunalokho ngesikhathi sasemini sokudubula.
2910 mah Ibhethri ihlala izinsuku 1-1.5 wokusebenza nge isimo yokusebenza ngokulinganisela "Alcatel Idol 3". Umsebenzisi Izibuyekezo liyasho ukuthi nokusetshenziswa anda kungenzeka, idivayisi kumele avuselelwe njalo ebusuku. Kodwa lapha kubalulekile sikhumbule eliphezulu kwesikrini futhi Ukucaciswa sasivumela esezingeni elifanele, izwe ibusa iningi amandla.
Ngakho, sabuka eminye imisebenzi ebalulekile "Alcatel Idol 3", idivayisi libuyekeza kubanikazi imibono yabo kule gajethi. Ngo ukucushwa wobuningi Idol 3 izobiza abasebenzisi mayelana 14 000 ruble. Noma ngabe igajethi ezidingekayo ukuze angiphe imali? Asihambe kafushane phezu zonke ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo.
Phakathi izinzuzo isisindo ngokuphawulekayo, ukujiya kanye inhlangano yabantwana bakwa-kudivayisi, iskrini omkhulu, izici ezinhle lobuchwepheshe, yesikhulumi Android 5.0 kanye umsindo wekhwalithi ephezulu. Of bokwenza okukhulunywa mafutha ukusebenza ikhamera, futhi esezingeni izithombe undistinguished ibhethri fragility chromium phezu bezinhlamvu kanti ezinye glitches isiqalisi. Ngakho, 14 000 - yako iwufanele ngempela intengo ye smartphone.
Smartphone LG uMoya H422: i Uhlolojikelele, izici kanye nokubuyekeza
Amavithamini izinwele "Revalid" - mayelana nokubuyekezwa izidakamizwa